မင်္ဂလာပါ … ဗျာ … ။ ကျနော် တို့ မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့ မှ ဦးစီပြီး ဒုတိယမြောက်အလှူအဖြစ် မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောဂါသည်ဂေဟာကို လှူဒါန်း ရန်အတွက် မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့ ကိုယ်စား ကျနော် မောင်ဘုန်း (၁၀) ရက်နေ့ည ၇ နာရီ လောက် မှာ Deauto အလုပ်ရုံ သို့အလှူခံ ထွက်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီအလုပ်ရုံ ရဲ့ နေရာ ကတော့ မလေးရှား နိုင်ငံ port klang လို့ လူသိများတဲ့ နေရာနဲ့၂ မိုင်ခန့် ဝေးတဲ့ west port ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ ပါ ။ ဒီ အလုပ်ရုံ ဟာ ကျနော် အလုပ် လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီ လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခု ဖြစ်သလို တရုတ် ကားတွေ တပ်ဆင်မို့အတွက် ကျနော် ခေတ္တ ရောက်နေတဲ့ နေရာလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနေရာလေး ကို ကျနော် တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် လောက် လာရောက် အလုပ်လုပ် ရပါတယ် ။ ဒီနေရာ လေးမှာ မြန်မာ အလုပ်သမား (၅၀) လောက်ရှိပင်မဲ့ ကျနော် နဲ့သိတဲ့ သူလောက်သာ အလှူခံ ခဲ့ပါတယ် … ။
ယနေ့ အချိန် ထိ ကောက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေ စာရင်းမှာ
မောင်ဘုန်း + ကောင်းကင်ဖြူ
ယနေ့ အချိန် ထိ ကျနော် ကောက်ခံ ရရှိငွေ စုစုပေါင်းမှာ ၃၀၀ RM တိတိ ဖြစ်ပါ တယ် ။ 12 .3. 2012 နေ့ မှာ ကျနော် အလုပ်ရုံ ရှိရာ jenjarom သို့ ပြန်မည် ဖြစ်ပါတယ် ... ။ ဒါကြောင့် klang _ bainting လမ်းမ ပေါ်တွင် နေထိုင်ကြသော ရွှေမြန်မာ များ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုပါက ကျနော် ထံသို့ဆက်သွယ် နိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ် ပါတယ် ခဗျာ ... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:25 AM
jasmine(တောင်ကြီး) March 11, 2012 at 9:23 AM
ချစ်စံအိမ် March 11, 2012 at 2:30 PM
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ လှူနိုင်ကြပါစေ
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် March 11, 2012 at 7:49 PM
mstint March 12, 2012 at 8:36 AM
သာဓု သာဓု သာဓုပါကွယ်။ အတိတ်ကံမကောင်းခဲ့သူများအတွက်